Muxuu yahay qoraalka ku qoran qoriga uu isticmaalay ninkii fuliyey weerarkii New Zealand – XAMAR POST
Muxuu yahay qoraalka ku qoran qoriga uu isticmaalay ninkii fuliyey weerarkii New Zealand
By Zakariye iiman On Mar 16, 2019
Argagixiye Brenton Tarrant oo ahaa ninkii fuliyey weerrarkii fuleynimadda iyo bahannimadda xambaarsanaa ee lagu qaaday masaajidyada ku yaal magaalada Christchurch qoriga uu ku fuliyey falkaas arxanka darran waxaa ku qornaa ilaa 5 magac iyo tiro sannad waxayna kala yihiin.
1: Anton Lundin Petterson:
Wuxuu ahaa ardey ku dilay dalka Sweden laba ilmood oo ahaa soo galooti ahaa.
2: Alexandre Bissonnette:
Wuxuu sanadkii 2017 weerar ku ekeeyey Masjid ku yaal wadanka Canada uuna ku dilay 6 qof.
Wuxuu ahaa hogaamiye u dhashay dalka Albania oo masuul ka ahaa kacdoonkii ka dhanka ahaa Boqortooyadii Cusmaaniyiinta.
4: Antonia Bragadin:
Wuxuu ahaa hogaamiye ka tirsnaa ciidankii Venetian ee dirirta la galay Cusmaaniyiinta, wuxuu ka baxay heshiis uu la galay Cusmaaniyiinta waxaana uu laayey maxaabistii Turkida.
5: Charles Martel:
Wuxuu ahaa hogaamiye military oo hogaaminayey ciidankii Frankish oo ahaa qabiil deganaa waxa haatan loo yaqaan dalka Faransiiska, hogaamiyahaas ciidankiisu waxay jabiyeen Muslimiintii Boqortooyadii Andalusia gaar ahaan dagaalkii Tours oo ka dhacay agaggaaraha magaalada Poitiers, ee wadanka Faransiiska.
Dagaalkaas oo Muslimiinta u taqaan
dagaalkii jidka ballaaran ee Shuhaddada ama معركة بلاط الشهداء waxaa hogaaminayey Abdul Rahman Al Ghafiqi oo ahaa Gudoomiyihii Cardoba oo ka tirsanayd Andalusia oo haatan ah Spain, waxaana lagu dilay dagaalka.
Muslimiintu (Umawiyiinta) waxay doonayeen inay duullaan ku qabsadaan Galbeedka Yurub laakiin dirrirtaas ayaa lagu jabiyey.
12-kii September 1683 waxaa dhacay dagaal ka qarxay magaalada Vienna ee wadanka Austria kaas oo dhexmaray Ciiddankii Boqortooyadii Roman-ka iyo boqortooyadii Habsburg oo iskaashanaya, lana dagaalamay ciidankii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta.
Dagaalkaas oo socday 16 sano waxaa guushu raacday xullufadii Kirishtaanka, waxaana uu sababay in Hungary ay ka baxdo gacanta Cusmaaniyiinta.
Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire,
The Enemy at the Gate,
Arab Conquest of Spain.
Madaxweynaha Jabuuti oo soo gaaray Muqdisho
Kulan labo geesood ah oo ka socda Villa Soomaaliya